Miriam na Erọn kwujọrọ Mosis (1-3)
Mosis dị umeala n’obi karịa mmadụ niile (3)
Jehova gbachiteere Mosis (4-8)
Ekpenta pụtara Miriam n’ahụ́ (9-16)
12 Miriam na Erọn malitere ikwujọ Mosis n’ihi nwaanyị onye Kush ọ lụrụ, maka na nwaanyị ọ lụrụ bụ onye Kush.+ 2 Ha nọ na-asị: “Ọ̀ bụ naanị Mosis ka Jehova sirila n’ọnụ ya kwuo okwu? Ó sibeghịkwa n’ọnụ anyị kwuo okwu?”+ Jehova nọkwa na-ege ntị.+ 3 Nwoke a bụ́ Mosis dị umeala n’obi karịa mmadụ niile+ nọ n’ụwa. 4 Jehova gwara Mosis na Erọn na Miriam na mberede, sị: “Unu atọ, gaanụ n’ụlọikwuu nzute.” Ha atọ wee gaa. 5 Jehova gbadataziri n’ogidi ígwé ojii,+ guzo n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu ahụ. O wee kpọọ Erọn na Miriam, ha abụọ agaa nso. 6 O wee sị ha: “Biko, nụrụnụ okwu m. Ọ bụrụ na e nwere onye amụma Jehova n’ime unu, m ga-esi n’ọhụụ mee ka ọ mata m.+ M ga-agwakwa ya okwu ná nrọ.+ 7 Ma, emeghị m otú ahụ n’ebe Mosis ohu m nọ. Ọ bụ ya ka a na-enyefe ụlọ m niile.*+ 8 M na-agwa ya okwu ihu na ihu,*+ otú doro anya. Anaghị m agwa ya okwu n’ilu. Jehova na-apụtakwa n’ihu ya. Gịnịzi mere na egwu atụghị unu ikwujọ Mosis ohu m?” 9 Jehova wee wesa ha ezigbo iwe. Ọ pụkwara n’ebe ha nọ. 10 Ígwé ojii ahụ si n’elu ụlọikwuu ahụ pụọ, ma lee, ekpenta pụtara Miriam n’ahụ́, ahụ́ ya achawa ezigbo ọcha.+ Erọn wee lee Miriam anya, ya ahụ na Miriam bụzi onye ekpenta.+ 11 Erọn gwara Mosis ozugbo, sị: “Onyenwe m, m na-arịọ gị, biko, gbaghara anyị mmehie a. Anyị zuzuru nzuzu n’ihe a anyị mere. 12 Biko, ekwela ka ọ dịrị ka onye nwụrụ anwụ, onye ebe ụfọdụ n’ahụ́ ya richara ericha mgbe a mụrụ ya.” 13 Mosis wee malite ịrịọ Jehova, sị: “Biko, Chineke, gwọọ ya, bikonụ.”+ 14 Jehova gwara Mosis, sị: “Ọ bụrụ na nna ya agbụọ ya asọ mmiri n’ihu, ọ̀ bụ na ihere onwe ya agaghị eme ya ruo ụbọchị asaa? Ka e si n’ebe unu mara ụlọikwuu kpọpụ ya ka ọ nọrọ iche ruo ụbọchị asaa.+ E mechaa, e nwere ike ịkpọbata ya.” 15 E wee si n’ebe ha mara ụlọikwuu kpọpụ Miriam iche ruo ụbọchị asaa.+ Ndị Izrel akwagaghị ebe ọzọ ruo mgbe a kpọbatara Miriam. 16 Ndị Izrel wee si na Hazirọt kwalie.+ Ha malitere ịma ụlọikwuu n’ala ịkpa Peran.+
^ Na Hibru, “N’ụlọ m niile, ọ na-egosi na e kwesịrị ịtụkwasị ya obi.”
^ Na Hibru, “ọnụ na ọnụ.”